မှေးရပျမွကေလူငယျတှကေိုဘောလုံးကစားနညျးအခမဲ့သငျပေးနတေဲ့ကြျောမငျးဦး | Popular
November 28, 2020 Asian Fame
မြန်မာ့လက်ရွေးစင်ဘောလုံးသမား ကျော်မင်းဦးက သူ့ရဲ့မွေးရပ်ဇာတိ ဖြစ်တဲ့ တောင်ငူမှာရှိတဲ့ လူငယ် အယောက် ၂၀ ခန့်ကို ဘောလုံး ကစားနည်း အခမဲ့သင်ပေးနေပါတယ်။ ကိုယ့်ရဲ့ဒေသက လူငယ်တွေကို ဘောလုံးကစားနည်း ပြန်လည်ဝေမျှဖြစ်ပုံ ကိုတော့ ကျော်မင်းဦးက….
ကျွန်တော်ကလေးတွေကို ဘောလုံးသင်ပေး ဖြစ်ပါတယ်။ အခုလည်း ကျွန်တော် ရန်ကုန်ကပြန်ရင် သူတို့အတွက် အင်္ကျီတွေဝယ်သွားမယ်။ ကျွန်တော့် ဘောလုံးအသင်းကလည်း ပြောက်တိပြောက်ကျား နဲ့ ဆိုအဆင်မပြေဘူး။ ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ပဲ အနုပညာလုပ်ငန်းကရတဲ့ ငွေကြေးနဲ့ ဝယ်ပေးနေပါ တယ်။ ကျွန်တော်က ဘောလုံးပညာကို သိထားတယ် ဆိုရင် ကိုယ့်နယ်ကသူတွေကို ပြန်ပြီး ဝေမျှပေးရမှာ ပေါ့။ ပရော်ဖက်ရှင်နယ် ဘောလုံးမကန်ဘူးဆိုရင် လည်း တိုင်းနဲ့ပြည်နယ် အဆင့်တွေ၊ သူတို့တွေ အားကစားလုပ်တဲ့အတွက် ကျန်းမာရေးပိုကောင်း လာမယ်။ အဲဒီလိုမျိုးလေး ရည်ရွယ်ပြီး သင်ပေးဖြစ် တာပါ။ ကျွန်တော်တို့နယ်မှာတော့ ဘောလုံးကစား နည်းကို ဘယ်သူမှ မသင်ပေးသလောက်ပါဘဲ။ အခု တော့ နယ်မှာရှိတဲ့ ညီလေးတွေရှိတယ်။ တချို့ဆို ရှမ်းမှာ ကစားတာရှိတယ်။ ရန်ကုန်မှာ ကန်တာရှိတယ်။ ဧရာဝတီမှာ ကစားတာရှိတယ်။ ကျွန်တော်မရှိရင် သူတို့ သင်ပေးနေပါတယ်လို့ပြောပါတယ်။
ကျော်မင်းဦးအနေနဲ့ မိဘတွေကလည်း အားပေးကြ တဲ့အတွက် ဘောလုံးသမားဖြစ်လာဖို့ အခက်အခဲ အတား အဆီးတွေသိပ်မရှိခဲ့ရပါဘူး။ ဘောလုံးသမားအများစုကို မိခင်တွေက တားမြစ်တာမျိုးတွေရှိတယ်လို့ ပြောပြခဲ့ပါတယ်။ အခုအချိန်မှာ ပရိသတ်အားပေးမှုရလာတဲ့ ကျော်မင်းဦးဟာ နိုင်းနိုင်း၊ ထူးအောင်တို့နဲ့လည်း ကြော်ငြာတွေ ရိုက်ကူးခွင့်ရ လာခဲ့ပါပြီ။ နိုင်းနိုင်း၊ ထူးအောင်တို့နဲ့ ဇာတ်ကားရိုက်ကူး ချင်တဲ့ သူ့ရဲ့ အိပ်မက်နဲ့ပတ်သက်ပြီး ကျော်မင်းဦးက…
ကိုနိုင်းနိုင်းတို့ဆို ကျွန်တော် တို့ငယ်ငယ်ကတည်းက သူတို့သရုပ်ဆောင်တာကို လေးစားရတဲ့ မင်းသားတစ် ယောက်ပါ။ ဘော်ဒီပိုင်းကလည်း တောင့်တောင့်တင်းတင်း ရှိတော့ အရမ်းသဘောကျတယ်။ ခန္ဓာကိုယ် ပိုင်းသန်မာတဲ့ မင်းသားတွေဆို ကျွန်တော် အရမ်းသဘောကျတယ်။ ကိုနိုင်း ကလည်း ကျွန်တော့်ကို ဘယ်လိုသရုပ်ဆောင်ရမလဲဆိုတာ သင်ပေးတယ်။ တော်တော်လေးအတု ယူရပါတယ်။ သူတို့နဲ့ ကိုယ် သရုပ်ဆောင်ရတာ ဘာမှမဆိုင်ပါဘူး။ ဆီနဲ့ ရေလိုပါပဲ။ သူတို့နဲ့လည်း အခွင့် အရေးရမယ်ဆိုရင် လုံးဝအလန်း ဇယား ဖိုက်မယ့် ကြမ်းမယ့် ဇာတ်ကားတစ်ကားလောက် ရိုက်ချင်ပါ တယ် လို့ပြောပါတယ်။
မွနျမာ့လကျရှေးစငျဘောလုံးသမား ကြျောမငျးဦးက သူ့ရဲ့မှေးရပျဇာတိ ဖွဈတဲ့ တောငျငူမှာရှိတဲ့ လူငယျ အယောကျ ၂၀ ခနျ့ကို ဘောလုံး ကစားနညျး အခမဲ့သငျပေးနပေါတယျ။ ကိုယျ့ရဲ့ဒသေက လူငယျတှကေို ဘောလုံးကစားနညျး ပွနျလညျဝမြှေဖွဈပုံ ကိုတော့ ကြျောမငျးဦးက….
ကြှနျတျောကလေးတှကေို ဘောလုံးသငျပေး ဖွဈပါတယျ။ အခုလညျး ကြှနျတျော ရနျကုနျကပွနျရငျ သူတို့အတှကျ အင်ျကြီတှဝေယျသှားမယျ။ ကြှနျတျော့ ဘောလုံးအသငျးကလညျး ပွောကျတိပွောကျကြား နဲ့ ဆိုအဆငျမပွဘေူး။ ကြှနျတျောကိုယျတိုငျပဲ အနုပညာလုပျငနျးကရတဲ့ ငှကွေေးနဲ့ ဝယျပေးနပေါ တယျ။ ကြှနျတျောက ဘောလုံးပညာကို သိထားတယျ ဆိုရငျ ကိုယျ့နယျကသူတှကေို ပွနျပွီး ဝမြှေပေးရမှာ ပေါ့။ ပရျောဖကျရှငျနယျ ဘောလုံးမကနျဘူးဆိုရငျ လညျး တိုငျးနဲ့ပွညျနယျ အဆငျ့တှေ၊ သူတို့တှေ အားကစားလုပျတဲ့အတှကျ ကနျြးမာရေးပိုကောငျး လာမယျ။ အဲဒီလိုမြိုးလေး ရညျရှယျပွီး သငျပေးဖွဈ တာပါ။ ကြှနျတျောတို့နယျမှာတော့ ဘောလုံးကစား နညျးကို ဘယျသူမှ မသငျပေးသလောကျပါဘဲ။ အခု တော့ နယျမှာရှိတဲ့ ညီလေးတှရှေိတယျ။ တခြို့ဆို ရှမျးမှာ ကစားတာရှိတယျ။ ရနျကုနျမှာ ကနျတာရှိတယျ။ ဧရာဝတီမှာ ကစားတာရှိတယျ။ ကြှနျတျောမရှိရငျ သူတို့ သငျပေးနပေါတယျလို့ပွောပါတယျ။
ကြျောမငျးဦးအနနေဲ့ မိဘတှကေလညျး အားပေးကွ တဲ့အတှကျ ဘောလုံးသမားဖွဈလာဖို့ အခကျအခဲ အတား အဆီးတှသေိပျမရှိခဲ့ရပါဘူး။ ဘောလုံးသမားအမြားစုကို မိခငျတှကေ တားမွဈတာမြိုးတှရှေိတယျလို့ ပွောပွခဲ့ပါတယျ။ အခုအခြိနျမှာ ပရိသတျအားပေးမှုရလာတဲ့ ကြျောမငျးဦးဟာ နိုငျးနိုငျး၊ ထူးအောငျတို့နဲ့လညျး ကွျောငွာတှေ ရိုကျကူးခှငျ့ရ လာခဲ့ပါပွီ။ နိုငျးနိုငျး၊ ထူးအောငျတို့နဲ့ ဇာတျကားရိုကျကူး ခငျြတဲ့ သူ့ရဲ့ အိပျမကျနဲ့ပတျသကျပွီး ကြျောမငျးဦးက…
ကိုနိုငျးနိုငျးတို့ဆို ကြှနျတျော တို့ငယျငယျကတညျးက သူတို့သရုပျဆောငျတာကို လေးစားရတဲ့ မငျးသားတဈ ယောကျပါ။ ဘျောဒီပိုငျးကလညျး တောငျ့တောငျ့တငျးတငျး ရှိတော့ အရမျးသဘောကတြယျ။ ခန်ဓာကိုယျ ပိုငျးသနျမာတဲ့ မငျးသားတှဆေို ကြှနျတျော အရမျးသဘောကတြယျ။ ကိုနိုငျး ကလညျး ကြှနျတျော့ကို ဘယျလိုသရုပျဆောငျရမလဲဆိုတာ သငျပေးတယျ။ တျောတျောလေးအတု ယူရပါတယျ။ သူတို့နဲ့ ကိုယျ သရုပျဆောငျရတာ ဘာမှမဆိုငျပါဘူး။ ဆီနဲ့ ရလေိုပါပဲ။ သူတို့နဲ့လညျး အခှငျ့ အရေးရမယျဆိုရငျ လုံးဝအလနျး ဇယား ဖိုကျမယျ့ ကွမျးမယျ့ ဇာတျကားတဈကားလောကျ ရိုကျခငျြပါ တယျ လို့ပွောပါတယျ။
ပရိသတျတှေ surprise လုပျတာခံလိုကျရတဲ့ နနျးဆုရတီစိုး
Coach တစ်ယောက်အဖြစ် ပရိသတ်ရှေ့ကို ရောက်ရှိလာမယ့် R ဇာနည်
သမီးတွေရဲ့ ဝါသနာအကြောင်း စမိုင်းပြောပြ